Beneshangul Gumuz: Rakkoo nageenyaa umameen namoonni 12 du'anii kumni 50 buqqa'an - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoo Naannoo Benshaangul Gumuz aanaa Kamashiifi aanaalee Oromiyaa ollaatti uumameen lubbuun namootaa ajjeefamanii 12 yoo gahuu, lakkoofsi namoota qee'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqaafamanii kuma 50 qaqabuu ittigaafatamaan Waajjirri Bulchiinsaafi Nageenyaa Godina Wallagga Bahaa BBC'tti himeera.
Aanga'oonni bulchiinsa Godina Kamashii Naannoo Beneshaangul Gumuz afur hidhattootaan ajjeefamuun walqabatee lammileen Oromoo fi Amaaraa buqqaafamanii guyyaa gara guyyaatti dabalaa jiraachuunsaa barameera.
Namoonni 14 madaa'anis buufata fayyaa aanaa Saasiggaafi Hospitaala Naqamteetti wallaanamaa jiraachuu Itti-Gaafatamaan Waajira Bulchiisichaa Obbo Taakkalaa Tolasaa himaniiru.
Godina Kamashiitii abbootiin warraa kuma 13 ol buqqa'an
Gambeellaatti namoonni sagal lubbuu 'dhaban'
Uummanni Oromoofi Amhaaraa kan buqqa'an aanaalee Naannoo Beneshaangul Gumuz keessatti argaman kan akka Baloo Jigaanfoyiifi Yaasookeessaa akkasumas aanaalee Oromiyaa daangaa irra jiran akka Haroo Limmuu, Soogeefi Saasiggaa keessaadha.
Qondaala Kominikeeshinii kan ta'e Eebbisaa Tafarii haala namoonni aanaalee Godina Wallagga Bahaafi Lixaa Naannoo Beneshaangul Gumuz waliin wal-daangessan keessa itti qe'eefi qabeenya isaanii irraa buqa'an aanaa Laaloo Assaabiitti argamee taajjabeera.
Eebbisaan bakka firoonni isaa irraa buqa'an Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggaas akka quba qabu duubbta. Akka inni jedhutti, ammallee namoonni birmannaan ga'aan gama gageenya isaanii mirkaneessuutiin dafanii nu qaqqabaa hin jiran jechuun komee dhiyeeffachaa jiraachuu dubbata.
Akka Obbo Taakkalaan jedhanitti namoonni buqqa'an kun aanaa Saasiggaa, magaalaa Naqamtee, aanaa Haroo Limmuufi aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessa qubatanii jiru.
" Dubbii kana tasgabeessuudhaaf akka qaama nageenyaatti raayyaan ittisa biyyaa gidduu galee hanga danda'ame haarsaa kaffalee rakkoon kun akka kana caalaa hin babal'anne hojjetameera. Uummanni Oromoofi poolisiin Oromiyaallee rakkoo sana tasgabeessuudhaaf haarsaa guddaa kaffalaa jira."
Rakkoon kun uummata Oromoofi Beneshaangul Gumuz gidduutti kan uumame waan hin taaneef dargaggoonniifi uummanni Oromoon bal'aan haala uumame kana obsaafi tasgabbiidhaan hojjetaa jiru kan dubbatan Obbo Takkalaan, "Namoonni du'an hunduu daangaadhuma keenya keessa seenuudhaan ajjeefaman," jedhan.
Bulchiinsi qaama nageenyaafi humna ittisa biyyaa dabalatee hojii tasgabeessuu cinaatti namoota jijjiirama akka biyaatti dhufe duubatti deebisuudhaaf hojjetan uumata waliin saaxiluufis hojjetamaa jira. "Hanga ammaatti namoonni yakka raawwataniiru jedhaman gama Beneshaangul Gumuzirraa 40 ta'an raayyaa ittisa biyyaatiin to'annaa jala oolaniiru. Gama Oromiyaarraa ammoo shan to'annaa jala oolaniiru," jedhan Obbo Taakkalaan.
namoota buqqa'an kanaaf gargaarsa barbaachisu kan jiraattonni magaalaa Naqamteefi naannoo ishee taasisaa jiran irratti dabalataan gabaasanii gargaarsa dabalataa mootummaa naannoorraa eeggachaa jirras jedhan Obbo Taakkalaan.
Rakkoon uumame kun rakkoo uummata lamaan gidduutti kan uumame akka hin taane barree bulchiisni gama lamaaniinuu jirru bu'uurarraa furuudhaafis alkaniifi guyyaa dhimma nageenyaarratti hojjechaa jirra jedhan, Itti-gaafatamichi.
Rakkoon uumame kun rakkoo uummata Oromoofi Beneshaangul Gumuz gidduutti uuma me miti kan jedhan Itti-gaafatamaan kun, namoota fedhii addaa naannoo sanarraa argachuu barbaadanitu akka dhuufaafi gareetiin socho'aa jiraachuu qoarataa turre jedhu.
"Rakkoon kun akka uumamu karoorsanii baajataan deggeranii bifa adda addaatiin socho'anii rakkoon kun uumameera.
Ka'umsi rakkoo nageenyaa kanaa humna kiraa sassaabdotaa naannoo sana keessa jiran bifa adda addaatiin uummanni naannoo daangaa jiraatu walitti bu'uuf hojii isaan hojjetaa turan hordofamee mootummaatti beeksifamaa tureera jedhan Obbo Takkalaan.
Obaang Metoon: ''Rakkoon Gambeellaa bubbuleera, ta'ulleen deebii tokkollee hin arganne,''
Guyyaa dheengaddaa namoota hiriira bahan irratti dhukaasni raawwate jedha hojii mirga namoomaan kan beekamu Obbo Obaangi Metoo.
26 Fuulbaana 2018
MM Abiy humnoota Tigraayif yeroo 'xumuraaf' sa'aatii 72 kennan
23 Sadaasa 2020
Itoophiyaan lammiilee nagaa Maqalee jiran akka miidhaarraa eegdu gaafatamte
Mo’amuu isaanii akka amanan michuun beekamaa Tiraamp isaan gorse
Lola Tigraay: Somaaliyaan Ministira Dhimma Alaa aangoorraa kaaste
Magaalaa Baahirdaaritti yeroo sadaffaaf haleellaan raawwate
Sa'uudiin 'haasaa iccitii' MM Israa'eel waliin gochuu waakkatte
Itoophiyaa naannoo Tigraay keessa lolli jiru maali?
Itoophiyaan yaada marii araaraa Gamtaan Afriikaa dhiyeesse kuffiste
Hambaan namticha sooressaafi garba isaa ganna 2,000n dura du'anii argame